သားဖြစ်​သူအား ဆုံးမရာမှ​လက်​လွန်​၍ သား​လေး​​သေဆုံးခဲ့ရ – MEDIALANN
သားဖြစ်​သူအား ဆုံးမရာမှ​လက်​လွန်​၍ သား​လေး​​သေဆုံးခဲ့ရ
၂၀၁၉ ဇွန် ​၁၆.
မန္တ​လေးမြို့.ချမ်းမြသာစည်​မြို့နယ်​.​အောင်​သာယာရပ်​ကွက်​.ဗဗ.၉/၇၉​​နေ ​ဒေါ်မ​အောင်​ကြွယ်​အား ​အောင်​ပင်​လယ်​စခန်းမှူး ရဲအုပ်​ စိန်​ထွန်း.နယ်​ထိမ်း​ခေါင်း​ဆောင်​ဒုရဲအုပ်​ဝင်းပိုင်​နှင့်​အဖွဲ့တို့သွား​ရောက်​စစ်ေ​ဆး​မေးမြန်းခဲ့ရာ ​သေဆုံးသူ၏မိခင်​ ​ဒေါ်မ​အောင်​ကြွယ်​ ဇွန်​လ၁၃ရက်​​နေက သားဖြစ်​သူ ​မောင်​ထူး​အောင်​လင်း​အား ဆုံးမ​နေစဉ်​အတက်​​ရောဂါဖြစ်​၍ ​ဆေးခန်းသို့ သွား​ရောက်​ကုသ​ပေးခဲ့ရပြီး ဇွန်​လ၁၆ရက်​​နေ့ ၃နာရီအချိန်​တွင်​​သေဆုံးခဲ့​ကြောင်း စစ်​​ဆေးသိရှိရသဖြင့်​
​သေဆုံးသူ ​မောင်​ထူး​အောင်း၏ အ​လောင်းအား ရဲ​ဆေးစာဖြင့်​ မန္တ​လေး ​ဆေးရုံကြီးသို့လပို့အပ်​ခဲ့ရာ PR16/2019ဖြင့်​လကိခံစစ်​​ဆေးပြီး ​မောင်​ထူး​အောင်​လင်း​သေဆုံးမှုနှင့်​ပက်​သက်​၍ ဓမ္မတာ အတိုင်းဟုတ်​ မဟုတ်​သိရှိနိုင်​ရန်​ ​သေမှု​သေခင်းအမှတ်​စဉ်​ ၉/ ၂၀၁၉ဖြင်​လ ​ရေးဖွင့်​​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့ရာ ​သေဆုံးသူ ​မောင်​ထူး​အောင်​လင်း၏ ဦး​ခေါင်းအား တံမြတ်​စည်းဝါးလက်​ကိုင်​ရိုးနှင့်​ ရိုက်​နှက်​ဆိုဆုံးမခဲ့​ကြောင်းသိရှိရပါသည်​
တရားလိုတို့အဖွဲ့သည်​ မန္တ​လေးမြို့ပြည်​သူ့​ဆေးရုံကြီးသို့သွား​ရောက်​ပြီး ​ဒေါက်​တာ ယမင်းချို .​ဒေါက်​တာဘုန်းလျှံ. ​ဒေါက်​တာ ဝင်းလွင်​​အောင်​တို့မှ​သေဆုံးသူ၏အ​လောင်းအား ရင်​ခွဲစစ်​​ဆေးခဲ့ရာ တရားလိုများလိုက်​ပါကြည့်​ ရှုခဲ့ရပြီး
​​သေဆုံးသူ၏ ဦး​ခေါင်း၌ရရှိ​သော ဒဏ်​ရာ​ကြောင့်​ ဦး​နှောက်​အ​မှေးပါးအ​ပေါ်၌​သွေးခဲခြင်း.အ​မှေးပါး​အောက်​၌​သွေးယိုခြင်းတို့​ကြောင့်​​သေဆုံးရခြင်းဖြစ်​​ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်​
လူ၏အသက်အား ​သေသည်​အထိ ဒဏ်​ရာရရှိ​အောင်​ ရိုက်​နှက်​ခဲ့သူ ​ဒေါ်မ​အောင်​ကြွယ်​.၄၄နှစ်​.ဦး​သောင်းတင်​၏သမီးဖြစ်​သူ၉/မရမနိုင်​၀၈၁၉၆၁ ကိုင်​​ဆောင်​သူအား ​အောင်​ပင်​လယ်​စခန်းမှူး ရဲအုပ်​စိန်​ထွန်းဦးမှ ၂၀၁၉.ဇွန်​လ.၁၇ရက်​​နေ့ည ၇နာရီအချိန်​တွင်​ ပ.၃၉၂/၂၀၁၉.ရာဇသကိကြီးပုဒ်​မ၃၀၂ဖြင့်​ အမှုဖွင့်​အ​ရေးယူ​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိပါ​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်
အမဖွေဈသူက သားဖွဈသူအား ဆုံးမရာမှလကျလှနျ၍သားလေးသဆေုံးခဲ့ရ
၂၀၁၉ ဇှနျ ၁၆.
မန်တလေးမွို့.ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ.အောငျသာယာရပျကှကျ.ဗဗ.၉/၇၉နေ ဒျေါမအောငျကွှယျအား အောငျပငျလယျစခနျးမှူး ရဲအုပျ စိနျထှနျး.နယျထိမျးခေါငျးဆောငျဒုရဲအုပျဝငျးပိုငျနှငျ့အဖှဲ့တို့သှားရောကျစဈဆေးမေးမွနျးခဲ့ရာ သဆေုံးသူ၏မိခငျ ဒျေါမအောငျကွှယျ ဇှနျလ၁၃ရကျနကေ သားဖွဈသူ မောငျထူးအောငျလငျးအား ဆုံးမနစေဉျအတကျရောဂါဖွဈ၍ ဆေးခနျးသို့ သှားရောကျကုသပေးခဲ့ရပွီး ဇှနျလ၁၆ရကျနေ့ ၃နာရီအခြိနျတှငျသဆေုံးခဲ့ကွောငျး စဈဆေးသိရှိရသဖွငျ့
သဆေုံးသူ မောငျထူးအောငျး၏ အလောငျးအား ရဲဆေးစာဖွငျ့ မန်တလေး ဆေးရုံကွီးသို့လပို့အပျခဲ့ရာ PR16/2019ဖွငျ့လကိခံစဈဆေးပွီး မောငျထူးအောငျလငျးသဆေုံးမှုနှငျ့ပကျသကျ၍ ဓမ်မတာ အတိုငျးဟုတျ မဟုတျသိရှိနိုငျရနျ သမှေုသခေငျးအမှတျစဉျ ၉/ ၂၀၁၉ဖွငျလ ရေးဖှငျ့ဆောငျရှကျခဲ့ရာ သဆေုံးသူ မောငျထူးအောငျလငျး၏ ဦးခေါငျးအား တံမွတျစညျးဝါးလကျကိုငျရိုးနှငျ့ ရိုကျနှကျဆိုဆုံးမခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါသညျ
တရားလိုတို့အဖှဲ့သညျ မန်တလေးမွို့ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့သှားရောကျပွီး ဒေါကျတာ ယမငျးခြို .ဒေါကျတာဘုနျးလြှံ. ဒေါကျတာ ဝငျးလှငျအောငျတို့မှသဆေုံးသူ၏အလောငျးအား ရငျခှဲစဈဆေးခဲ့ရာ တရားလိုမြားလိုကျပါကွညျ့ ရှုခဲ့ရပွီး
သဆေုံးသူ၏ ဦးခေါငျး၌ရရှိသော ဒဏျရာကွောငျ့ ဦးနှောကျအမှေးပါးအပျေါ၌သှေးခဲခွငျး.အမှေးပါးအောကျ၌သှေးယိုခွငျးတို့ကွောငျ့သဆေုံးရခွငျးဖွဈကွောငျးသိရှိရသဖွငျ့
လူ၏အသကျအား သသေညျအထိ ဒဏျရာရရှိအောငျ ရိုကျနှကျခဲ့သူ ဒျေါမအောငျကွှယျ.၄၄နှဈ.ဦးသောငျးတငျ၏သမီးဖွဈသူ၉/မရမနိုငျ၀၈၁၉၆၁ ကိုငျဆောငျသူအား အောငျပငျလယျစခနျးမှူး ရဲအုပျစိနျထှနျးဦးမှ ၂၀၁၉.ဇှနျလ.၁၇ရကျနညေ့ ၇နာရီအခြိနျတှငျ ပ.၃၉၂/၂၀၁၉.ရာဇသကိကွီးပုဒျမ၃၀၂ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ